I- Msasa Guest House (indlu yonke) - I-Airbnb
I- Msasa Guest House (indlu yonke)
Chinhoyi, Mashonaland West Province, iZimbabwe
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Wendy
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Dis 8.
I-Msasa Cottage ilungele isihambi esidiniwe ukuba siphumule futhi siqabuleke endleleni eya kwezinye zezindawo ezinhle kakhulu emazweni ethu, noma ikhaya elikude nesivakashi edolobheni lethu elincane. Sine-2 ensuite amakamelo, i evulekile uhlelo ikhishi, yokudlela futhi indawo ephilayo ebheke lush ingadi eluhlaza. Ngezindawo zokuzijabulisa zangaphandle ukuze sijabule kakhulu ngesimo sezulu sethu esihle saseZimbabwe.
Indlu Yesivakashi isengadini ekhanyayo nezolile emadolobheni ase-Chinhoyi. Sinikeza amakamelo okulala amabili, ngalinye lineminyango emihle yokhuni evuleka ingadi. Kanye nekhishi elivulekile, indawo yokudlela kanye nendawo yokuhlala yangaphandle enesivande esakhiwe ngohhavini we-pizza wamapulangwe kanye netafula lomnatha ukuze ujabulele umndeni nabangane ngokufanayo.
- 4kms ukusuka enkabeni yedolobha
- 4kms kusukela edumile Chinhoyi Imihume
- 3hrs from beautiful Lake
Kariba - Ama-5hrs avela Esikhungweni sethu Sefa Lomhlaba, i-Mana Pools National Park
UMsasa ukhona emadolobheni ase-Chinhoyi.
Eduze nedolobha ngokwanele ukwenza uhambo olusheshayo lwezinto ezidingekayo njll kodwa kude ngokwanele nedolobha ukuze ujabulele ukuthula nokuthula okuncane.
Mina nomyeni wami sihlala endlini engumakhelwane futhi sithanda ukunikeza izivakashi ukwamukelwa okufudumele lapho zifika futhi sizokweluleka ngenjabulo nganoma yimiphi imibuzo ongaba nayo noma uma ufuna amaphuzu athakazelisayo endawo noma imininingwane ewusizo.
Mina nomyeni wami sihlala endlini engumakhelwane futhi sithanda ukunikeza izivakashi ukwamukelwa okufudumele lapho zifika futhi sizokweluleka ngenjabulo nganoma yimiphi imibuzo ong…